Global Voices teny Malagasy » Fantaro i Sanjib Chaudhary, hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline mandritra ny herinandron’ny 13-19 Aogositra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Aogositra 2019 5:37 GMT 1	 · Mpanoratra Christie Maria James Nandika Liva Andriamanantena
Ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam-piteny an-tserasera manerana an'i Azia, hifandimby ireo mpikatroky ny teny sy mpanandrateny hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline  hizara ny zava-niainany tamin'ny famelomana aina indray sy fampahafantarana ireo fitenin-drazany. Niarahan'ny Rising Voices , ny Digital Empowerment Foundation , ary ny O Foundation  niasa ny fanentanana.
Isak'herinandro dia hamaly fanontaniana maromaro momba azy ny mpampiantrano tsirairay ary hanome fomba fijery fohy momba ny fiteniny. Miaraka amin'i Sanjib Chaudhary (@sankuchy ) ny resadresaka etoana izay manolotra ny zavatra horesahiny mandritra ny herinandro amin'ny maha-mpampiantrano azy.
Mpiofana ho injeniera momba ny simia aho sady manam-pahaizana manokana momba ny asan'ny serasera, mpanoratra Nepal ato amin'ny Global Voices  aho ary mitantana ny Global Voices Lingua Nepali . Mitantana ny bilaogy “Voice of Tharus ” aho izay miresaka momba ny kolontsaina, ny fomban-drazana ary ny tantaran'ny Tharus, ilay vondrom-poko fahefatra lehibe indrindra ao Nepal. Mpanohana ny famelomana aina indray ireo fiteny nanjavona aho ary nandray anjara tamin'ny tetikasa hamelomana azy ireo.
Miteny ny teny Tharu Tatsinanana  aho izay ampiasain'ny olona manodidina ny 250.000 eo ho eo. Amin'izao fotoana izao, misy ny rakibolana an-tserasera  navoaka izay ahitana ny teny manan-danja avy amin'ilay fiteny. Na izany aza, mbola betsaka ny tokony hatao – mbola ilaina ny fanangonana sy ny fanovana ho nomerika ny literatiora Tharu Tatsinanana ary ny fitsipi-pitenenana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/14/142620/